Nepal Samaya | उपमहानगरमा पनि मिल्यो भागबन्डा, काठमाडौंमा होटेलको छतबाट खसेर विदेशीको मृत्यु [२०७९-१-७]
उपमहानगरमा पनि मिल्यो भागबन्डा, काठमाडौंमा होटेलको छतबाट खसेर विदेशीको मृत्यु [२०७९-१-७]
नेपाल समय | काठमाडौं, बुधबार, वैशाख ७, २०७९
बुधबार, वैशाख ७, २०७९, काठमाडौं
काठमाडौं- बुधबारका मुख्य घटनाक्रमसहितको नेपाल समय समाचार प्रमुख शीर्षकहरू
३ महानगर र ७ उपमहानगर कांग्रेसको भागमा पर्ने गरी सत्ता गठबन्धनले मिलायो भागबन्डा, माओवादीले २ उपमहानगर पाउँदा समाजवादीले पायो हेटौँडा। मिल्यो भागबन्डा
स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग गरेको १६ अर्बभन्दा बढी रकम रोक्यो अर्थले, बजेट निकासा नहुँदा मन्त्रालयका काममा नकारात्मक असर परेको गुनासो । स्वास्थ्यको गुनासो
सर्वोच्चको आदेश लिएर गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हाल्न राष्ट्र बैंक पुगे अधिकारी, आफूमाथिको कारबाही फुकुवा समग्र प्रणालीको जित भएको दाबी। गभर्नरको पुनर्बहाली
प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनावसम्म नै वर्तमान सत्ता गठबन्धन कायम हुने शक्ति बस्नेतको दाबी, सरकार गठनका लागि गठबन्धन बनाएकै बेला सहमति भइसकेको प्रष्टोक्ति
र, इंग्लिस प्रिमियर लिग (ईपीएल) अन्तर्गत मंगलबारको खेलमा युनाइटेडविरुद्ध लिभपरपुलको जित, अक्टोबरयता पहिलो पटक अंकतालिकाको शीर्षस्थानमा पुग्यो लिभरपुर । शीर्षमा लिभरपुल
अब समाचार विस्तारमा
उपमहानगरमा पनि मिल्यो भागबन्डा
पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनबीच वैशाख ३० गते हुने स्थानीय चुनावमा महानगर र उपमहानगरको भागबन्डा मिलेको छ।
बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकले महानगर र उपमहानगरको भागबन्डा टुंग्याएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड निकट स्रोतले जानकारी दिएको हो।
६ महानगरमध्ये कांग्रेसले काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगरको मेयर पाएको छ। माओवादीले भरतपुर, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पोखरा र जनता समाजवादीले वीरगन्जको मेयर पाएका छन्।
उपमहानगरमा कांग्रेसले सात र माओवादीले दुई र एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले एक/एकमा मेयर पाएका छन्। कांग्रेसका भागमा धनगढी, नेपालगन्ज, तुलसीपुर, बुटवल, कलैया, इटहरी र धरान परेका छन्।
माओवादी केन्द्रले घोराही र जितपुर सिमराको मेयर पाएको छ। एकीकृत समाजवादीले हेटौंडा र जनता समाजवादीले जनकपुरको मेयर पाएका छन्।
मेयर पाएका ठाउँमा सोही दलले उपमेयर नपाउने सहमति गठबन्धन दलहरूबीच भएको छ। यसअघि नै गठबन्धनले महानगरको उपमेयर पदको पनि भागबन्डा गरेको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश समग्र सिस्टमका पक्षमा आएको बताएका छन्।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट निलम्बन फुकुवा भएसँगै आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न बुधबार राष्ट्र बैंक पुगेका गभर्नर अधिकारीले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश समग्र सिस्टमका पक्षमा आएको बताएका हुन। उनले निलम्बन पछिका दिनमा आफ्नो पक्षमा भन्दा पनि समग्र प्रणालीका पक्षमा बोलिदिनेहरु प्रति आभार व्यक्त गरे।
सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश प्रणालीको पक्षमा आएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले आगामी दिनमा आउने आदेश पनि आफ्नो पक्षमा आउने आशा व्यक्त गरे। उनले आगामी दिनमा मैले पेस गरेको निवेदनमाथि थप सुनुवाइ गर्दैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, मौद्रिक नीति, मौद्रिक स्थायित्व, आर्थिक स्थायित्व सम्बन्धमा यसरी नै सन्देशहरू आउने आशा राखेको बताए।
चैत २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो। गभर्नर अधिकारीविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेसँगै निलम्बनमा परेका थिए। गभर्नर अधिकारीले वैशाख ४ गते आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।
गभर्नर अधिकारीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र गभर्नरका रूपमा काम गर्न दिन मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त निवेदनमाथि बैशाख १३ गते अन्तरिम आदेशका लागि सुनुवाइ गर्न पेसी तोकिएको छ।
अर्थले रोक्यो स्वास्थ्यको १६ अर्ब
अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निकासा गर्नुपर्ने १६ अर्बभन्दा बढी रकम रोक्का गरिदिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि छुट्याइएको बजेट रोक्का गरिदिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित कार्यसञ्चालन गर्न नै अप्ठेरो परेको गुनासो गरेको हो। बजेटमा उल्लेख भएको रकम नै अर्थले रोकिदिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई काम गर्नै अफ्ठेरो परेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट पछिल्लो ८ महिनादेखि बजेट रोकिदिएको छ। 'अर्थले ८ महिनादेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट निकासाको बारेमा न त कुनै जानकारी गराएको छ न त निकासा नै गरेको छ,' स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'अर्थले बजेट निकासा नगरिदिँदा स्वास्थ्यका काम र कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्।' बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा माग प्रस्ताव प्राप्त भएपछि उक्त रकम निकासा हुने वा नहुने भनी सम्बन्धित निकायलाई १५ दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्छ। ती अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय र अस्पताल तथा कार्यक्रमका लागि अर्थसँग १६ अर्बभन्दा बढी माग गरिएको भएपनि निकासा भएको छैन।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज निरौलाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको बजेट माग र निकासाबारे आफूलाई पूर्ण जानकारी नभएको तर प्रक्रिया नपुगेका कारण बजेट रोक्का भएको हुन सक्ने बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरेरै अर्थ मन्त्रालयमा माग पठाइएको दाबी गरेको छ।
तालमेलको विरोधमा कांग्रेस कार्यालयमा ताला
सत्तारूढ गठबन्धनबीच पोखरा महानगरपालिकाको मेयर पद एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमतिपछि नेपाली कांग्रेस कास्की कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ।
केन्द्रको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेसको पोखरा महानगर समितिले जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको हो। महानगरका सचिव टुवराज बास्तोला र गणेशबहादुर थापाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तालाबन्दीको निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन्।
जिल्ला कार्यसमितिसँग मात्रै सोधेर पोखराको मेयर एकीकृत समाजवादीलाई सुम्पेको भन्दै आफ्नो आत्मसम्मानमा चोट पुगेको उनले बताएका छन् ।
प्रदेश र जिल्ला सभापतिलाई किनाराको साक्षी राख्दै नेकपा एसलाई मेयर पदमा प्रश्ताव गरिएको समाचारले महानगर समिति उपेक्षित भएको महसुस भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘हामी पनि विधानअनुसार निर्वाचित भएका हौं । यस्ता निर्णयले कांग्रेसका पहरेदार सिपाहीहरूको आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट लागेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सत्ताभन्दा माथि उठेर आमकार्यकर्ताको मनोभावना उच्च राख्न महानगरले जिल्लाको पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थापाले बताए।
होटलको छतबाट खसेर मृत्यु
काठमाडौंको ठमेलमा होटेलको सातौँ तलाबाट खसेर एक विदेशी नागरिकको मृत्यु भएको छ। आज बिहान ठमेलस्थित मनाङ होटेलको सातौँ तलाबाट खसेर उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
मृत्यु हुनेमा आयरल्यान्डका ३३ वर्षीय एलन मिक फिलिप्स रहेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी दिनेशराज मैनालीले जानकारी दिए।
उनी होटेलमा एकजना साथीसँग बसेको खुलेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा लडेरै उनको ज्यान गएको पाइएको छ। उनी यही अप्रिल ६ मा नेपाल आएको खुलेको छ।
एसपी मैनालीका अनुसार शव पोस्टमार्टमका लागि अस्पतालमा पठाइएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनावसम्म नै वर्तमान सत्ता गठबन्धन कायम हुने दाबी गरेका छन्।
नेपाल समयसँग कुराकानी गर्दै नेता बस्नेतले वर्तमान गठबन्धन कामय रहेन आधारहरू स्पष्ट रहेको दाबी गरेका हुन्।
संसद् विघटनको प्रयास र राजनीतिक उपलब्धि उल्ट्याउने कदम चाल्दा राजनीतिक मोर्चाबन्दी बनाएका स्मरण गर्दै उनले लोकतन्त्र रक्षाका लागि पनि वर्तमान गठबन्धन आवश्यक रहेको दाबी गरे।
प्रदेश सभाको निर्वाचन र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म एक भएर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकार बन्दा नै सहमति भएको उनको दाबी छ।
(नेता बस्नेतसँग गरिएको विस्तृत कुराकानी नेपाल समय डटकममा पढ्न सकिनेछ)
सुत्केरीलाई मासिक ३ हजार!
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। रोल...
मंगलबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आफ्नो पार्टीले चुनाव जिते सुत्केरी महिलालाई मासिक ३ हजारका दरले तीन महिनासम्म भत्ता दिने घोषणा गरेको छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक वडामा प्रसूति सेवा उपलब्ध गराइनेछ र निम्न आय भएका हरेक सुत्केरीलाई तीन महिनासम्म ३ हजार मासिक भत्ता दिइनेछ।’
स्थानीय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता, क्यान्सर मिर्गौला तथा मेरुदण्ड रोगबाट पीडित स्थानीय नागरिकलाई मासिक स्वास्थ्य भत्ता, प्रत्येक किशोरीलाई पाठेघर क्यान्सर विरुद्धको खोप, प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक सुलभ औषधि पसलको व्यवस्था गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
सबै नागरिकलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
इंग्लिस प्रिमियर लिग (ईपीएल) अन्तर्गत मंगलबार राति सम्पन्न भएको खेलमा लिभपरपुले सानदार जित निकालेको छ।
एनफिल्ड रंगशालामा भएको खेलमा घरेलु टिम लिभरपुलले युनाइटेडमाथि ४–० गोलको जित निकालेको हो।
लिभपरपुलको जितका लागि मोहम्मद सलाहले दोहोरो गोल गरे। उनले खेलको २२ औं र ८५औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। खेलको खेलको पाँचौँ मिनेटमै लुईस डियाजले गोल गरेर युनाइटेडविरुद्ध अग्रता बनाएका थिए।
त्यस्तै, दोस्रो हाफको पहिलो गोल भने साडियो मानेले गरे। उनले खेलको ६८औं मिनेटमा गोल गरेकाथिए।
यो जितसँगै लिभरपुल अक्टोबरयता पहिलो पटक अंकतालिकाको शीर्षस्थानमा पुगेको छ। तर एक खेल कप खेलेको म्यानचेस्टर सिटी लिभरपुलभन्दा दुई अंकले मात्र पछि छ। यसकारण अहिले लिगको उपाधिमा लिभरपुल र सिटीको निकै रोचक प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ।
यता, शीर्ष चारको लागि संघर्ष गरिरहेको युनाइटेडले भने ३३ खेलबाट ५४ अंक जोडेको छ। ऊ अहिले छैटौं स्थानमा छ। चैथो स्थानको टोटेनहमले ३२ खेलबाट ५७ अंक बनाउँदा आर्सनलेले ३१ खेलबाट ५४ अंक जोडेको छ।
प्रकाशित: April 20, 2022 | 22:02:32 काठमाडौं, बुधबार, वैशाख ७, २०७९
'मानवताको सहर' बुटवलमा दलितले कोठा भाडा पाउँदैनन्
जातका आधारमा हुने विभेदलाई कानुनले निषेध गरेको र बुटवलमा मानव भएर बाँच्न मानवताको सहर नारा तय गरिए पनि त्यसैलाई खिल्ली उडाउँदै जातीय भेदभावको घटना सार्वजनिक भएको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आज पत्रकार सम्मेलन गर्ने
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आज पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएको छ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाद्वारा सामुदायिक विद्यालयमा नि:शुल्क इन्टरनेट जडान
तिलोत्तमा नगरपालिकाले अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नगर प्रमुख रामकृष्ण खाणले बिहीबार नगरसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश अघिल्लो वर्षका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
सुविना गिरी शंकास्पद मृत्यु प्रकरण : पोष्टपार्टम रिपोर्टले माइतीको दाबीलाई बल पुग्ने
सुविनाको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा ‘प्रेसर ओभर नेक’बाट मृत्यु भएको प्रारम्भिक रिपोर्ट आएको ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक ठगबहादुर केसीले बताए।
रवि लामिछानेको पार्टीले घन्टी चुनाव चिन्ह नपाउने!
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणासँगै घन्टी चुनाव चिन्ह प्रस्ताव गरेका रवि लामिछानेले उक्त चिन्ह नपाउने देखिएको छ।
स्वतन्त्र व्यक्तिको 'सफलता'बाट हौसिएर स्वतन्त्र पार्टी, पुरानालाई कति चुनौती?
रविकै भाषा अनुसार राजनीतिक फोहोर सफा गर्न हिलोमा छिरिसकेका छन्। अब राजनीति सफा गर्ने सन्दर्भमा हिलोसँगको पौठाजोरी र धुलोसँगको मुकाविला कसरी गर्लान्? त्यो समयसँगै खुल्दै जानेछ।
पाठ्यक्रमबारे समीक्षा गर्न त्रिविमा पाँच दिने कार्यशाला
पाठ्यक्रम समीक्षाको लागि ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभाग त्रिविले कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेको छ।
न्यायाधीशलाई १० करोड घुस दिन खोज्ने वकिल रुद्रप्रसाद आफैँ विवादको घेरामा
व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्न ‘सेटिङ’को प्रयास गरेका वकिल रूद्रप्रसाद पोखरेलले न्यायाधीशसँगको टेलिफोन कुराकानी बाहिर ल्याएपछि उनीमाथि पनि आलोचना सुरु भएको छ।
'राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी'विरुद्ध स्वतन्त्रकै उजुरी
रवि लामिछानेले घोषणा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका व्यक्तिहरुले उजुरी दिएका छन्।
माइग्रेनको समस्या भएकाहरूका लागि लाभदायक तीन योगासन
माइग्रेनको दुखाई कम गर्नका लागि औषधिहरू पनि छन्। तर, केही योगासन गरेर पनि माइग्रेनको दुखाइलाई कम गर्न सकिन्छ।
पालिकाले ल्याए बजेट, फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको चाहना [२०७९-३-१०]
फेरि एक पटक प्रधानमन्त्री बनेर देशलाई नयाँ युगतिर लैजाने प्रचण्डको चाहना, पहिलो कार्यकाल अलमलमा बितेपनि दोस्रो कार्यकालमा राम्रो काम गरेको दाबी। प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना
नेकपा एसलाई मन्त्री फेर्नै 'सकस', नेपालको फिफा वरीयतामा पहिरो [२०७९-३-९]
ओली सरकारले एसपीपी स्वीकृत गरेको कुरा घामजत्तिकै छर्लंग भएको प्रचण्डको दाबी, लोकप्रिय उम्मेदवार नभएका ठाउँमा हार व्यहोर्नुपरेकाले सचेत हुने प्रतिबद्धता। प्रचण्डको दाबी
घुस प्रकरण मुछिएका न्यायाधीश निलम्बनमा, अफगानिस्तानमा शक्तिशाली भूकम्प [२०७९-३-८]
व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्न न्यायाधीशलाई घुस अफर गरेका वकिल रूद्रप्रसाद पोखरेलले आफैलाई स्वनिलम्बन गरेका छन्। अडियो सार्वजनिक भएपछि उनकै आलोचना सुरु भएपछि उनले आफ्नो स्वनिलम्बनको घोषणा गर्दै आफूमाथि छानबिन गर्न माग गरेका हुन्।
सातै प्रदेशले ल्याए ३ खर्ब ५ अर्बको बजेट, क्रिकेटमा जित फुटबलमा हार [२०७९-३-१]
सातै प्रदेशका सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन्। सातै प्रदेशले ३ खर्ब ५ अर्बको बजेट आज एकैदिन सम्बन्धित प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन्।
'एसपीपी'बारे परराष्ट्रमन्त्रीको प्रष्टीकरण, पाहुना गएका भिनाजु र आफन्त मिलेर हत्या! [२०७९-२-३१]
प्रतिनिधिसभामा मंगलबार सांसदहरुले उठाएका प्रश्‍नको जवाफ दिने क्रममा उनले अहिलेको राष्ट्रवादी सरकारले कुनै पनि मुलुकसँग सैन्य गठबन्धन नगर्ने बताएका हुन्।